izinto Five unyango - Shijiazhuang YiLing Hospital
ZeNkqubo imithi zokubulala izinambuzane
Zibuze esiqu, isebenze kwegazi uthothe stasis igazi, isuke umoya kunye nazisasaza kubanda, esusa ubushushu detoxicating
Medicine bath unembali ende kwilizwe lethu. Ngokutsho kwirekhodi ukususela ekuqaleni Zhou Dynasty, kuthandwa ngokuhlamba umhluzi aqholiweyo. Ukusuka Qing Dynasty, webhate amayeza iye kuthathwa indlela ephumelelayo lokuthintela kunye nokunyanga izifo.
YiLing usebenzisa iyeza ekhaya Chinese emveli Chinese ukuqalisa i element ezintlanu iyeza webhate iimpawu, ukuphumeza injongo detoxification, isuke ngamathontsi, nazisasaza ezibandayo, nokunyanga izifo kunye moya.
Five elements unyango lube nempembelelo entle umhlaza nokunyanga, scleroderma, yoma dystrophy, rheumatism, isifo neuron iimoto, udinwe, isifo seswekile, nephropathy, kunye nezinye iintlobo zezifo ezingapheliyo kunye namatyala kakhulu.